Madaxweynaha Jubaland iyo mucaaradkiisa Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar oo heshiiyey. Riix Halkan
MUQDISHO, Soomaaliya - Tiro madaafiic ah ayaa lagu weeraray xerada Xalane, oo fariisin u ah ciidamada AMISOM, kuna yaallaan xaafiiyada UN-ka iyo Saradaado ay kamid tahay mida Mareykanka.
Kooxda Al-Shabaab ayaa war ay soo saartey ku shaacisay in 7 hoobiye ay ku ridey Xalane, kuwaasoo ay tilmaantay inay dhamaan ku dhaceen gudaha, balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay.
Dadka ku nool nawaaxiga Garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inay maqleen jugta madaafiicda maanta lagu weeraray saldhiga AMISOM ee Xalane, kaasoo amaankiisa aad loo adkeeyay, maadaama ay ku shaqeeyaan madaxda ugu sareysa UN-ka.
Lama oga halka laga soo tuurey hoobiyeyaasha, iyadoo weerarkan uu imaanaya iyadoo wadooyinka jid-cadiyaasha dhexmara degmada Wadajir lagu gooyey dhagxaan, islamarkaana wadooyinka waaweyn ay fadhiyeen ciidamo boolis ah.
Muqdisho ayaa martigelinaysa weeraro qaraxyo, madaafiic iyo dilal isagu jira mudooyinkii dambe xilli madaxda sare ee dowladda Federaalka ay ku mashquulsan yihiin arrimo siyasaadeed, khilaafyo iyo faragelinta doorashoorinka maamul goboleedyada.
Bishii lasoo dhaafay, labo qarax oo baabuur walxaha qarxa lagu soo xiray loo adeegsaday ayaa ka dhacay afaafka hore ee Aqalka Madxtooyadda, kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof, iyadoo tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen.
Sawirro laga soo qaadey dhismaha ayaa muujiyay khasaaro xooggan oo gaarey xafiisyada.
Farmaajo oo baaq kasoo saarey colaad ka aloolsan Wanlaweyn 05.04.2020. 23:14
Sheekh Shariif oo digniin u diray madaxda Dowladda Soomaaliya 05.04.2020. 20:42
Ku dhowaad 20-kun wadaado Tabliiq ah oo karantiil la geliyey 05.04.2020. 19:30
Covid-19: Cabasho laga muujiyey hanaanka karantiilka Kenya 05.04.2020. 18:30
Midowga Yurub iyo Madasha Xisbiyada oo afar qodob ka shiray 05.04.2020. 17:30
Mareykanka oo difaacay Haaruun Macruuf xili uu eedeeyay NISA 05.04.2020. 15:00